अन्य ठाउकाे मतगणनामा तार जाली , पाल्पामा किन खाली ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
अन्य ठाउकाे मतगणनामा तार जाली , पाल्पामा किन खाली ?
बिउबपाल्पा, मंसिर २१ कतिपय ठाउँमा हातसमेत नछिर्ने तारजालीसहित सिसी क्यामेरा लगाइँदा पाल्पामा भने दलका प्रतिनिधि नै राखेर मतगणना गर्ने तयारी थालिएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको पाल्पा दरबारमा हुने मतगणनामा दलका प्रतिनिधिलाई टाढै राख्ने तर तारजाली नलगाउने मुख्य निर्वाचन अधिकृत शंकरराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।
‘मतगणनास्थलमा कुनै पनि तारबार हुनेछैन’, मुख्य निर्वाचन अधिकृत शंकरराज बरालले भन्नुभयो, ‘दलीय प्रतिनिधिलाई टाढै राखेर मतगणना गरिने छ ।’